Turn Life On – Iskaa U Noqoshada
Hadda iska wado noloshaada.
Ugu danbeyntii markaad hesho go'aanka diidmada kama danbeynta ah ee codsigaaga qaxootinimo, waa inaad markaa ka fikirtaa iskaa u noqoshada. Tigidhka safarka waxaa dheer ood heli kartaa in lagaa kaalmeeyo waxbarasho ama inaad ku shaqaalowdo wadankaaga.
Sugitaan noloshaada kuma horumareyso.
Waxba kama baran kartid
Reerna ma dalban kartid
Si sharciyan ah uma shaqeysan kartid
ma heleysid guri rasmi ah
Weydii su'aalo dheeriya
Sharci degenaansho la'aan Finland
Waxaad heli kartaa dib u dejin cusub oo lacag caddaan ah
Kaalmo lacag caddaan ah
Kaalmo shey anfac leh, tusaale inaad waxbarato, shaqaalowdo ama deegaan.
Kaalmada lagu siinayo haddaad iskaa u noqoneyso waxay kaa caawineysaa, inaad noloshaada kusii wato waddankaaga. Waxaad kala dooran kartaa kaalmada inaad caddaan ku qaadaneyso ama aad ku badalaneyso faa'iido kale, taasoo kaa caawin karta tusaale inaad ganacsi sameysato ama deegaan hadba sidaad adigu jeceshahay.
La soo xiriir xarunta kaamka ama
la taliyaha iskood u noqodayaasha
adiga iyo shaqaalaha
Waxaa lagaa caawinayaa
qaban qaabada safarka
Waxaad dib ugu noqoneysaa wadankaagii
maalintii lagu heshiiyey
Ka qeyb qaado wada hadalka
Wax kaweydii iskaa u noqoshada xirfadleyda
iyo inaad kala sheekeysato kuwo iskood u noqonaya.
Sheekada dib u guurayaasha
Waxa aan arruurineynaa xafidida xogta adeega isticmaalida iyo waxyaabaha kale inagoo kaashaneyna teknolojiyada. Xafidida waa ciiwaan yar, kasoo ku keydinaya kumbiyuutarka isticmaalaha, markuu booqdo beejka. Xafidida ma aha mid ay ku gudo jirto macluumaadka qofka, mana aha mid loo adeegsanayo isticmaalka barnaamijka. Falanqeynta sticmaalka beejka waxaan isticmaaleynaa adeega falanqeyaha googlaha si uu tixraac ugu sameeyo isticmaalaha adeega shabagada. Waxay naga caawineysaa urrurinta tirokoobka, tusaale inta soo booqatey beejka iyo weliba gaarahaan mida sida wanaagsan loo xiiesynay iyo waxa ku guda jira si loo falanqeyo isticmaalka beejka. Faahfaahin dheeriya sharuudaha falanqeynta googlaha waxaad ka aqrisan kartaa halkan: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=fi Isticmaalka falaqeynta googlaha waxaad ka diidi kartaa halkan: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Adeega google siyaabaha dhowrista xogta waxaad ka aqrisan kartaa halkan: https://www.google.com/policies/privacy/